Ubulili be-Oral okwamanje buvame kakhulu ngemibhangqwana engqingili kanye nobungqingili. Kodwa-ke, abaningi abaqapheli ukuthi lo mkhuba wezocansi ungabangela izifo eziningi ezithathelwana ngocansi. Namuhla sizokhuluma ngeziphi izifo ezingahle "zithathwe" ngokuxhumana nezicathulo zomlingani nendlela yokuzivikela. Ngokungangabazeki, lolu lwazi luwusizo kuwo wonke umuntu ohlala ocansini. Ngakho-ke, yini ongayithola uma unezocansi zomlomo?
Ukulala ngomlomo kanye nokutheleleka
Ukutheleleka ngezocansi ngomlomo kuyingozi kakhulu kokubili kokubili amadoda nabesifazane. I-virus ekhonjiwe emlonyeni womlomo noma izitho zangasese zenkampani yenethiwekhi zingangena emvelweni omuhle womlingani wayo futhi ziqale ukwandisa ngenkuthalo lapho. Okokuqala, lokhu kubangelwa ukuthi izimbungulu ezinamaqabunga ziyisimanga esihle kakhulu sokukhiqiza isikhunta, amagciwane nama-bacterium. Ngakho-ke akungabazeki ukuthi ngokuxhumana nomlomo ongavikelekile unganikezwa ngeziqephu eziningi zezifo ezithathelwana ngocansi. Yini ongayithola ngokusebenzisa ubulili bomlomo? Kuyawusizo noma yikuphi ukutheleleka
Izici ezihambisanayo zokutheleleka
Amathuba okutheleleka ngokuyinhloko ancike ezigabeni zomlindi - ukuzivikela okuncane, inani elikhulu lama-bacterium e-pathogenic emlonyeni womlomo kumuntu onomlomo oxhumana naye ngokobulili nomuntu ogulayo, omncane emlonyeni. Zonke lezi zinto zikhulisa kakhulu amathuba okutheleleka.
Izifo eziningi, ezivame ukuvela ezithombeni zobulili, zitholakala ezithombeni ze-ENT. Futhi yini ongayithola igciwane lesandulela ngculazi, sizocabangela ngezansi.
Izifo kanye nobulili ngomlomo
Ukutheleleka kokuqala, esizoxoxa ngakho, kuyi-vulvovaginal candidiasis. Ngokuvamile, i-Candida ibhekisela ku-microflora ye-pathogenic yomzimba wethu, ngakho-ke ayifakiwe kuhlu lwezifo ezithathelwana ngocansi. Kodwa i-fungus iyadluliselwa ngokuthe xaxa ngokuxhumana ngomlomo-ngomzimba, futhi ubungakanani bayo emgodini womlomo kunganda ngo-50%. Kulesi simo, i-candidiasis yesigxobo somlomo ingenzeka. Ngokuvamile kukhona i-vulvovaginal candidiasis, okubangela izimpawu ezinjalo ezinjengoba kuhlambalaza emzimbeni, ukukhishwa kwamakhaza nokubomvu. Emadodeni, i-candida iba imbangela ye-balanoposthitis - ukuvuvukala kwe-prepuce. Ngenhlanhla, i-candida ngokushesha "iqoqa" amasosha omzimba. Ngesikhathi esifanayo uProfesa Tulio Simoncini uqinisekile ukuthi noma yisiphi isisu somdlavuza sinesisindo se-fungal kanye ne-candidiasis ayikwazi ukuqaliswa kunoma yikuphi.
Ukutheleleka kwe-gonococcal akuvamile. I-Gonococcus "iyakuthanda" ukudala i-pharyngitis ne-stomatitis, ixazulule embranini ye-ENT ezithombeni nasemlonyeni.
I-Syphilis ivame ukuhanjiswa nge-oral-genital contact, ngoba njengoba nge-blowjob microtraumas yomlomo womlomo cishe akunakwenzeka ukugwema. Ngenxa yalokho, i- spirochete ephaphathekile ingena emzimbeni wesifazane. Lesi simo sivame ukuhlala njalo, ngoba ngokuxhumana nomlomo okungavimbelwe-ngokocansi, isifo sofuba sisakazwa cishe ngaso sonke isikhathi. Ngesikhathi esifanayo, imibhangqwana eminingi iqinisekisa ukuthi ubulili bomlomo buyindlela ewukuphela kokugwema ukutheleleka kumlingani.
I-Chlamydia yisifo esiyingozi kakhulu se-venereal, esasanda kuvame kakhulu emisebenzini yezokwelapha. I-Chlamydia inzima ukubona ngoba ingaba yinkimbinkimbi futhi kunzima ukuphulukisa, ngoba i-chlamydia iyinhlamba yama-intracellular. I-Chlamydia ene-oral-genital contact iyakwazi ukungena emathangeni nasezindaweni zomphimbo ukuya emzimbeni. Ngokuvamile, le bacterium inezinga eliphezulu lokusinda emaqenjini ahlukene omzimba.
I-Trichomoniasis yi-STD ejwayelekile futhi engathí sina, kodwa namuhla ayijwayelekile. Kulesi simo, i-trichomoniasis ayidluliswanga ngesandulela ngculaza, nakuba kungenzeka ukutheleleka ngesidlo esivamile.
Ezinye izifo ze-venereal zidluliselwa ngokungajwayelekile nge-oral-genital umzila, kodwa ingozi yokudluliselwa kwazo isaphila. I-ureaplasmosis ayidluliswanga ngesikhathi sezocansi zomlomo, kodwa kukhona ingozi yokutheleleka ngezindlela zasendlini.
I-Herpes ne-HPV ene-caresses yomlomo
Lezi yizona ezivame kakhulu, kodwa ezingathandeki nakwezinye izimo ngisho nezifo eziyingozi ukuthi, uma sezidle, zihlala khona kuze kube phakade. Kodwa-ke, ngokuzivikela komzimba okuhle, "bayathula" futhi abangeke babangele izimpawu.
Njengamanje, kunombono wokuthi amakhaza ezindebe nezindebe zomzimba ziyizifo ezihluke ngokuphelele futhi uma ukuxhumana ngomlomo kungenzeki. Yebo, ngokuvamile umkhuhlane ubangelwa uhlobo lokuqala lwe-herpes, futhi ukuqhuma kwezidakamizwa kungowesibili. Kodwa-ke, kokubili amagciwane angabangela ukuqhuma emlonyeni nasezinhlobonhlobo zomzimba, futhi ukutheleleka kwenzeka kuphela ngezocansi zomlomo. Ngaphezu kwalokho, ngisho nekhondomu ayinikezi isiqinisekiso esiphelele sokuphepha - ingaba nokukhubazeka noma isakhiwo esiyingozi. Ukutheleleka kwenzeka kwezinye izingxenye zomzimba womlingani othintekayo yigciwane.
Igciwane lomuntu we-papilloma litholakala emzimbeni cishe wonke umuntu. Ezinye zezinhlayiya zayo azilimazi, kanti ezinye zingaholela ezifweni ezingokwemvelo. I-Papillomavirus idluliselwa ngokuyinhloko ngemikhakha yomlomo kanye nemilenze, kanye nangesikhathi sokubeletha kusuka kumama kuya kwengane nangempahla yasendlini.
I-HIV kanye nobulili bomlomo
Abaningi banesithakazelo kumbuzo wokuthi ungathola i-HIV ngokusebenzisa ucansi lomlomo noma akufanele ukwesabe. I-immunodeficiency virus iyingozi kakhulu futhi kunzima ukuphatha izifo, ezithunyelwa ngokobulili. Ukutheleleka nge-oral-genital contact kungenzeka, kodwa ingozi yalokhu encane kakhulu. Ngokusho kocwaningo, eminyakeni embalwa kwakungekho necala elilodwa lokutheleleka nge-HIV ngokusebenzisa ucansi lomlomo.
E-US, uKimberly Schaefer wenza ukuhlolwa lapho abantu abangu-198 bathatha ingxenye ekhuthele emlonyeni womlomo. Ngesikhathi esifanayo, abaningi babo babexhumana nabalingani abanegciwane lesandulela ngculazi. Kodwa-ke, yedwa kuphela otheleleke, cishe cishe hhayi ngale ndlela, ngoba igciwane lalihlala isikhathi eside kakhulu emzimbeni. Izinto ezithathelwana ngculaza zitholakale ematheni abahlanganyeli bokuhlola. Ngenkathi kungaziwa ukuthi yini eyabangela ukubukeka kwabo, kuqinisekiswe ukuthi laba bantu bahola indlela yokuphila enempilo, balandele impilo yomzimba nokuhlanzeka kwesigxobo somlomo.
UKimberly Schaefer wathola ukuthi ngesenzo esisodwa socansi amathuba okutheleleka angama-4:10 000. Ukuqhathanisa: ingozi yokutheleleka ngokusebenzisa isandulela ngculazi ngekhondomu ingu-4: 1000. Uma owesifazane ephethe ubulili ngomlomo ngesisu esinegciwane lesandulela ngculazi, amathuba okutheleleka amancane, kodwa nokho kukhona.
Kusukela ekubukeni kwezinto eziphilayo, ukudluliselwa kwegciwane lesandulela ngculaza kungaba kusuka e-penis kuya emgodini womlomo futhi kusukela emzimbeni ukuya emlonyeni womlomo. Amathuba okutheleleka kusuka emlonyeni kuya emcimbini okwamanje afundiswa. Ngemva kokucabangela ukuthi kungenzeka yini ukubamba i-HIV ngokusebenzisa ucansi lomlomo , sizoqala ukuxoxa ngesinye isihloko - umdlavuza we-throat ne-AIDS.
Ingabe umdlavuza womphimbo unomlomo wezinyosi?
Ososayensi bayaqhubeka behlolisisa ingozi yokutheleleka nalezi noma ezinye izifo ngokusebenzisa ucansi lomlomo. Kuze kube manje, kunombono wokuthi le weasel ingaholela ekuthuthukiseni i-oncology yomphimbo. Futhi le ngozi ikhona ngempela.
Futhi lihlotshaniswa ne-papillomavirus echazwe ngenhla. Ukungabhemi nokuphuza utshwala, njengoba ososayensi abathola, ezimweni eziningi azikwazi ukuholela kwi-oncology yomphimbo uma umzimba ungenayo yezinhlobo ze-HPV ezibangela umdlavuza. Kulabo besifazane abaye bahlanganyela ocansini ngomlomo nabalingani abangaphezu kwesithupha, ingozi yokuthuthukisa i-oncology yanda izikhathi eziyi-8.6.
I-AIDS kanye nobulili bomlomo
I-AIDS - isigaba sokugcina sokutheleleka nge-HIV, esibhekene nokunqotshwa cishe kwezinhlelo zonke zomzimba. Ngingathola yini i-AIDS ngezocansi zomlomo?
Sekuyisikhathi eside ososayensi bazi ukuthi ungathola i-AIDS ngokusebenzisa ucansi lomlomo, kodwa iphesenti kuncane. Kodwa ngonyaka ka-2000, kwenziwa ucwaningo e-US ebonisa ukuthi odokotela babephutha ngombono wabo - ingozi yokutheleleka ngezocansi ngomlomo ingu-8% eqenjini lamadoda angu-102 angama-homo-no-sexual orientation. Abanye bakholelwa ukuthi lesi sibalo sishaywa phansi.
UDkt. Ronald Valdiserri uphikisa ukuthi ngokudluliselwa ngomlomo ngomlomo-isisu somzimba we-HIV, okuyinto yesigaba sokuqala se-AIDS, akudingekile ukuthi ube nezilonda noma izilonda emlonyeni. Igciwane alilona nje kulesidoda, kodwa futhi ku-fluid seminal ehamba phambili ekupheleni kwepenisi ngaphambi kwe-orgasm. Amazinyo akudingeki aphule - ukusikeka okuncane nokuqeda okwanele kuvumela ukuthi igciwane lingene egazini.
Kodwa-ke, abanye abacwaningi bathi into enjalo njengegciwane lesandulela ngculazi yisifo esithintekayo esizuzisa uhulumeni wase-US. Futhi abalingani bezocansi zeziguli abangeke bahlaselwe yibo.
Uma nje emva kokuya ocansini (ukuphuza kangcono kunokungakaze), wazibuza ukuthi ungayithola yini igciwane lesandulela ngculazi ngomlomo, ngokushesha uphathe umlomo womlomo ngama-disinfectants. Isibonelo, "i-Miramistin." Futhi ekuthengiseni kukhona ukulungiselela "i-Cytale", ephathekayo kokubili izitho zangasese zangaphandle kanye nesigxobo somlomo ngokushesha ngemuva kokuxhumana nomuntu onegciwane.
Nokho, kungcono ukusebenzisa ikhondomu noma i-latex ekhethekile ye-vulva yokuqeda ngokuphelele ingozi yokutheleleka.
Ekuphetheni, ngifuna ukusho ukuthi okungenani unabo abalingani bocansi, amathuba okutheleleka ngezifo zocansi. Ukuze ungazibuze ukuthi yini engayithola igciwane lesandulela ngculazi, gwema ukuxhumeka okungajwayelekile futhi ube yiqiniso kwabathandekayo bakho.
Ubani ongqingili? Kuyini ukuhlukunyezwa?
Wedding ebusuku - yini okumele ngiyenze?
Kanjani ukuze orgasm? Amathiphu Girls
Kanjani ukuze kusheshiswe Windows 7 by ukumisa